GORFEYNTA CAAFIMAADKA & DHIIG-SHUBIDDA , Maxaan Ugu Deeqayaa Dhiigga? “Why should I donate Blood? . Jamal A Mouse | CeelGardi News
January 5, 2019 - Written by Wararka
Ugu horreyn, waydiintan sare ku sheeggan , waxa si waafi ah uga jawaabbay Ururka caafimaadka Dunida “WHO” Oo sidaartiisa ku soo koobtay sheegmada ah =Dhiig la sugay caafimaadkiisa ayaa ah badbaadiyaha Nolosha iyo xaqijiinta Caafimaadka= ” Safe blood saves lives and improves health”.
Hadaba, baahiyaha inta badan saldhigga u noqda hanaanka dhiig-shubidda, waxa ka mid ah qoddobadan soo socda:
• Xaalad Daran oo ka dhalata Uur ku sameysma Oogada Makaanka oo hooyada ku keenna dhiig-bax ka hor wakhtiga dhalmada, xiliga dhalmada amma ka dib amminta dhalmada.
• Dhiig-yaraanta asiibta Dhallaanka, gaar ahaan noocyada dhiig-yaraanta laga dhaxlo durreynta daran ee cuddurka Duumada amma xaaladdaha Nafaqo darrada.
• Fiix, buro amma ka soo bax asiiba bukaanka amma Qofka.
• Tubaha qallinada Adag “Complex Surgical Procedures”.
• Xaaladdaha ka dhasha Daaweynta Culus “Complex medication”,
• Durreynta Cuddurada Faafa iyo Bukaanada qaba Cuddurka Kansarka ” Complication of Infectious disease and cancer patients”.
• Daaweynta Bukaanadda u baahan joogteynta dhiig-shubidda “Thallassaemia and Sickle Cell Disease patients”.
• Daaweynta Bukaannada u baahan xoojinta cunsurada dhiig soo saaridda kobciya “To make the clotting factor products with Haemophilia patients”.
• Baahidda Hanaanka Adeegga dhiig-shubidda oo u baahan joogteynta kor u qaadista deeq-bixiyeyaasha dhiigga. Iyada oo ahmiyad wayn la siinayo helitaanka dhiig badbaado leh.
• Filashada iyo halloosiga yarreynta dhicitaanka khataraha amma wadne xanuunka deg-degga ah. Maxaa yeelay, faaiidooyinka laga helo dhiig shubidda waxa ka mid ah yareynta amma hoos u dhigga sameysanka adkaanshaha dareerenimada dhiigga “It reduces the Blood’s Viscosity”.
• Hoos u dhigga Xaddiga guud ee Subagga Dhiigga “Lowered the total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol” iyo ilaalinta cuddurada wadnaha ku dhaca “protecting against cardiovascular disease”.
Si kastaba ha ahaatee, ka jawaabidda xaaladdaha sare ku sheegan, waxa la gaadhi karaa kaliya marka la kobciyo garaadka dhiig-bixiyaha, islamarkaanna la yagleelo xarumaha bangiga kaydka dhiigga oo si mas’uuliyad iyo aqoon ku dhisan u fulin kara qoddobo ay ka kid yihiin kuwan soo socdda:
• Ilaalinta shuruudaha dhiig-shubidda,
• Ogaalka sababaha dhiig-shubidda,
• Fahanka ahmiyadda dhiig-shubidda,
• Yareynta cawaaqim xumadda ka dhalan karta dhiig-shubidda.
• Dhiirigalinta Doorka Deeq-bixinta Dhiigga,
• Kobcinta aqoonta cilmiga dhiigga iyo tababaradda,
• Qorista habraaca nidaamyada, heerbeegyada iyo halbeegyada u degsan bangiyada kaydka dhiigga.
• Dejinta siyaasaddaha dhiig-shubidda,
• Sameynta shuruucda dhiig-shubidda,
• Qoondeynta dhaqaale ku filan adeegga bangiga dhiigga,
• Fulinta cilmi-baadhista cuddurada iyo xalaaddaha keenna dhiig-shubidda.
• Kor u qaadista wacyiga ka qaybgalka fayo-dhawrka iyo nadaafadda bulshada.
• Xoojinta ka hortagga cuddruada faafa.
Ugu danbeyntii, waxa qadarin wayn mudan in madaxweynaha iyo ku xigeenka dalka JSL ay shacabkooda ugu deeqaan dhiigooda, waana astaan muujineysa ka go’naanshaha horumarinta adeegga caafimaadka, xoojinta bangiga kaydka Dhiigga iyo dhiirigelinta horusocodka dhiig-shubidda.
Agaasimaha Wasaarada Horrumarinta Biyaha Somaliland